ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်ကို | November 2019
အဘယ်အရာကိုအမှန်တကယ်-hosting VPS နှင့်မည်သို့တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောပံ့ပိုးပေးရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်
Website တစ်ခုအတွက်အစောပိုင်းအဆင့်ဆင့်အတွက်အရေးအပါဆုံးခြေလှမ်းများ၏တဦးတည်း - တဲ့ web host ကိုရွေးချယ်ခြင်း။ သူတို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချိန် မှစ. အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကွန်ရက်ထိန်းသိမ်းသူများ, တန်ဖိုးနည်းအဆိုပြုချက်များတွင်ယေဘုယျအားစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအသုံးမပြုတဲ့အရင်းမြစ်များအဘို့ overpaying မရှိဘဲလိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးစွမ်းရည်များကိုမယ်လို့တစ် hosting အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှေးခယျြလေ့ရှိပါတယ်။
Router D-Link DIR-620 ကို configure
Wi-Fi ကို router ကို D-Link DIR-620 သည်ဤလက်စွဲစာအုပ်တှငျကြှနျုပျတို့ရုရှားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးပံ့ပိုးပေးအချို့ကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကြိုးမဲ့ router ကို D-Link DIR-620 ကို set up ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်ကြောင့်ပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့နိုင်အောင်အိမ်မှာကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုထူထောင်ရန်လိုအပ်သူကိုပုံမှန်အသုံးပြုသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။
Wi-Fi ကို router ကို NETGEAR JWNR2000 တက်ချိန်ညှိခြင်းကအင်တာနက်
ကျနော်တို့ NETGEAR router များတူညီ D-Link အဖြစ်ရေပန်းစားမဟုတ်, သူ့အဘို့မေးခွန်းများကိုအတော်လေးမကြာခဏအတူတူပင်ပေါ်ထွန်းကြောင်းဝန်ခံရန်ရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ကွန်ပျူတာကိုပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်ကွန်နက်ရှင် router ကို NETGEAR JWNR2000 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အင်တာနက်ဝင်ရောက်ဖို့က configure ။ ဒါရဲ့ start ပါစေ ... တစ်ဦးကို PC ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် device ကိုတည်ထောင်မီ, သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာချိတ်ဆက် setup ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းယုတ္တိ setting ကိုဝင်။
ဘယ်လိုသင်ဤအကောင့် VC ကိုအတွက်စိတ်မချရခဲ့သိလား: လက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပေးချက်များနှင့်ညွှန်ကြားချက်
VKontakte လူမှုကွန်ယက်အပြည့်အဝပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကသူ့ဟက်ကာများ၏တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်အသုံးပြုသူကာကွယ်ပေးနိုငျပါဘူး။ မကြာခဏဆိုသလိုအသုံးပြုသူအကောင့်အဆိုပါခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကျူးကျော်သူတွေကအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ spam ဖြန်ကိုဖန်ဆင်းကတည်းကမေးခွန်းတွင်စသည်တို့ကို Third-party သတင်းအချက်အလက်, နေရာချ .. "ဘယ်လိုသင် VC ကိုအတွက်သင့်စာမျက်နှာတိုက်ခိုက်ခံရသိရသလဲ
Router ကို (ကိုယ်ပွား, MAC emulator) ၏ MAC address ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
အိမ် Router က devices အားလုံးကအင်တာနက်နှင့်ဒေသခံကွန်ယက်ကိုသေချာစေရန်ထားသောအခါအတော်များများကသုံးစွဲသူများ, တူညီတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုအတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် - MAC address ကိုပုံတူပွားခြင်း။ အချို့ပံ့ပိုးပေး, အပိုဆောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့အသင်န်ဆောင်မှုများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအတွက်စာချုပ်၏နိဂုံးမှာသင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကိုကဒ်၏ MAC address ကိုမှတ်တမ်းတင်ဆိုတဲ့အချက်ကို။
Browser ကို Internet Explorer ကို disable သို့မဟုတ် uninstall လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အားလုံးစာဖတ်သူများမှနှုတ်ခွန်းဆက်! ကျနော်တို့လွတ်လပ်သော browser များ ratings ၏နံပါတ်ယူပါလျှင် - သာ 5% အတိုး (မပို) အသုံးပြုသူများသည် Internet Explorer ကိုအသုံးပြုပါ။ အခြားသူတွေအဘို့, သူတစ်ခါတစ်ရံရုံလမ်းအတွက်ရရှိသွားတဲ့: ဥပမာ, တစ်ခါတစ်ရံကောက်ကာငင်ကာကို default သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဘရောက်ဇာကိုရှေးခယျြထားလျှင်ပင်, tabs များအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖွင့်လှစ်, စတင်သည်။
Picozu - အွန်လိုင်းအခမဲ့ပုံရိပ်ကိုအယ်ဒီတာ
ကျွန်မမကြာခဏအခမဲ့အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာများ၏အာဘော်များဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြသဖြင့်, အကောင်းဆုံး photoshop နဲ့ပတျသကျတဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာရှိသကဲ့သို့ဂရပ်ဖစ်, အွန်လိုင်းသူတို့ထဲကလူကြိုက်အများဆုံးနှစ်ခုထွက်ဒေါ်ခင်မျိုးသက်ကတင်ပြထားပါတယ် - Pixlr အယ်ဒီတာနှင့် Sumopaint ။ ရုရှား - နှစ်ဦးစလုံး (သို့သော်တစ်ဦးအခပေးစာရင်းပေးသွင်း၏အခြေအနေပေါ်ရရှိနိုင်သည့်၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက်) နှင့်များစွာအသုံးပြုသူများအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းတည်းဖြတ်ရေးဓာတ်ပုံများများအတွက် tools များ၏ကျယ်ပြန့ရှိသည်။
အဆိုပါလက်တော့ကို Wi-Fi ကို (ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များရှာမမျှမရရှိနိုင်ပါဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်) နဲ့ချိတ်ဆက်မထားဘူး
အခြို့သောအပြောင်းအလဲအဘယျသို့အပြီးအထူးသဖြင့်ဘုံတစ်ဦးကမျှမျှတတဘုံပြဿနာ: ပင်အတွေ့အကြုံရှိမာစတာဘို့, တော်တော်လေးလွယ်ကူသည်မဟုတ်အကြောင်းပြချက်ရှာတွေ့ဖို့, တစ်ခါတစ်လေစသည်တို့ကိုသင်၏ operating system, Router ကိုအစားထိုး, update ကို firmware ကို, reinstall .. ဒီသေးငယ်တဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ကျနော်တို့အများဆုံးမကြာခဏ laptop ကို Wi-Fi ကိုမှတဆင့်ချိတ်ဆက်မသည်သောကွောငျ့သောအခါသမယ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
မည်သို့ခြုံငုံသုံးသပ်: အင်တာနက်အမြန်နှုန်း Check
ကြိုဆိုပါတယ်! ငါသည်သင်တို့၏အင်တာနက်အမြန်နှုန်းနှင့်အတူမအားလုံးနှင့်မအမြဲကျေနပ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေလျင်မြန်စွာဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်အခါဟုတ်ကဲ့, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုအလွန်လျင်မြန်စွာကို "လူရှုပ်" နှင့်ပွင့်လင်းနှောင့်နှေးစာမျက်နှာများမပါဘဲတက်နေတဲ့ - စိုးရိမ်ဖို့ဘာမျှမ။ သို့သော်ပြဿနာများ၏အမှု၌ - ပြုပါရန်အကြံပြုကြောင်းပထမဦးဆုံးအရာ - အင်တာနက်အမြန်နှုန်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
Router ကို TP-Link ကို (စတုရန်းမီတာ 300 ကြိုးမဲ့ N ကို Router TL-WR841N / TL-WR841ND) Configuring
နေ့သည်ကောင်းသော။ ယနေ့အတွက်အိမ်တွင်းက Wi-Fi ကို router ကိုတက် setting အပေါ်အခြားဆောင်းပါး, ငါ TP-Link ကို (စတုရန်းမီတာ 300 ကြိုးမဲ့ N ကို Router TL-WR841N / TL-WR841ND) မှာနေဖို့ချင်တယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ထို setting ကိုဒီအမျိုးအစားအများအပြားသည်အခြား router များနှင့်မတူဘဲမဟုတ်ပါဘူးပေမယ့်, router များ TP-Link ကိုတောင်းမေးခွန်းတွေအတော်လေးတွေအများကြီး။
ပြီးတာနဲ့အိမ်သူအိမ်သား (သို့မဟုတ်ရုံး) တွင် Wi-Fi ကို router ကိုနှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုလာအများအပြားအသုံးပြုသူများကိုချက်ချင်း signal ကို၏သေချာဧည့်ခံနှင့် Wi-Fi ကိုအားဖြင့်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းမှဆီလျော်မှုပြဿနာတွေကြုံနေရနေကြသည်။ တဖန်သင်တို့ကိုငါထင်, Wi-Fi ကိုဧည့်ခံ၏အမြန်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေး A မြင့်ဆုံးခဲ့သည်ကိုမြင်ချင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါက Wi-Fi ကို signal ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုကျော်ဒေတာထုတ်လွှင့်များ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများစွာဆှေးနှေးပါမညျ။
Router ကိုရဲ့ MAC address ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
ငါ့အဘို့အချို့ ISP များကို၎င်းတို့၏ client များအတွက် binding ရဲ့ MAC-based လိပ်စာအသုံးပြုသိရန်သတင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူအညီပေးသူတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် MAC address ကိုတစ်ဦးကွန်ပျူတာကနေအင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လျှင်, အခြားအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုသည် - အသစ်တစ်ခုကို Wi-Fi ကို router ကိုဝယ်ယူသည့်အခါသည်ဥပမာ, သငျသညျမိမိအဒေတာများကိုပါသို့မဟုတ် MAC- ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် router ရဲ့ settings ကို၏လိပ်စာ။
အွန်လိုင်းဟော်ကီရုရှားကိုလိုဗက်ကီးယားနှင့် Sochi အတွက် 2014 ခုနှစ်အိုလံပစ်၏အခြားဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဓိကကနောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်၏အဖြစ်အပျက် - 2014 ခုနှစ် Sochi အတွက်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ, ငါတို့ပရိသတ်တွေအကြားလူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းထဲကတစ်ခု - ကယောက်ျား play အထူးသဖြင့်အခါ, ဟော်ကီပါပဲ။ မနေ့က - ထိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အတူဂိမ်းနှင့်ယနေ့, 16 March 2014 16:30 - (ကျွန်တော်, လမ်းဖြင့်နှစ်နှစ်အကြာကမ္ဘာ့ဖလား၏နောက်ဆုံးအတွက်ရှုံးနိမ့်သော) ရုရှားနှင့်ဆလိုဗက်ကီးကစား။
Router ကို Beeline + ဗီဒီယိုများအတွက် Asus က RT ကို-N12 D1 တက်ချိန်ညှိခြင်း
ငါ Beeline များအတွက်ကြိုးမဲ့ router ကို ASUS က RT ကို-N12 ကို set up ဖို့ဘယ်လိုအချိန်ကြာမြင့်စွာရေးသားခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သူကအနည်းငယ်အခြား devices ကြီးနှင့် firmware ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းနဲ့သူတို့ကိုထောက်ပံ့, ထို့ကြောင့်အတွက် configuration process ကိုတစ်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားလှပါတယ်။ သူကဆိုင်ထဲသို့ဝင်ရသောနှင့်အတူ D1 နှင့် firmware ကို - - လက်ရှိအချိန်တွင်အမှန်တကယ်ကို Wi-Fi ကို router ကို ASUS က RT ကို-N12 ၏တည်းဖြတ်မူ3။
Asus ကမှာ Wi-Fi ကို router ကိုအပေါ်စကားဝှက်ထားရန်ကဘယ်လို
သင်သည်သင်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါက, ပြုပါရန်လုံလောက်သောလွယ်ကူပါတယ်။ Asus က - သင်တစ်ဦးသည် router D-Link ရှိပါကငါပြီးသားဤအချိန်ရဲ့အဖြစ်ရေပန်းစား router များအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့, Wi-Fi ကိုအပေါ်စကားဝှက်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံရေးထားပြီ။ ဒါကကြေညာချက် ASUS က RT ကို-G32, RT ကို-N10, RT ကို-N12 နှင့်အများဆုံးကိုအခြားသူများအဖြစ်ဤအက Wi-Fi ကို router များအဘို့အညီအမျှသင့်လျော်သည်။
အသက် 30 အရှိဆုံးရယ်စရာရှာဖွေရေး Yandex နှင့် Google query လုပ်တဲ့အခါ
သငျသညျအစဉျအမွဲလူတွေစိတ်ဝင်စားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သတင်းအချက်အလက်သူတို့ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားဖူးပါသလော ကျနော်တို့ Yandex နှင့် Google အတွက်အများဆုံးရယ်စရာရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်တစ်ရွေးချယ်ရေးပြုစုခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဤမေးခွန်းများကိုအများအပြားအဘို့စိုးရိမ်ကြသည်။ - - - - ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Yandex ပင်ဤကိစ္စများတွင်ကူညီရန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ - - - - - အိုး, ဒီကြမ်းတမ်း Chelyabinsk - တခါတလေက ... တွေ့ကြုံတတ်၏။
ကျွန်ုပ်မည်သို့ ID နှင့်အတန်းဖော်သိလားနှင့်အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်
ဆိုက်အတန်းဖော်ပေါ်တွင်သင်၏စာမျက်နှာများနံပါတ်များပါဝင်သည်ဟု, ID ကိုဟုခေါ်သည့် parameter သည်ရှိပါနဲ့။ အဘယ်ကြောင့်သူမလိုအပ်စျနိုငျသလဲ - က hacked ထားပြီးသို့မဟုတ်သင်သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့လျှင်၎င်း၏စာမျက်နှာ ID ကို restore နိုင်ရန်အတွက်အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး။ သင်အတန်းဖော်မစစ်ကြောဘဲနေနိုင်မယ်ဆိုရင်သို့သော်သင်မည်သို့, သင့် ID ကိုသိကြပါသလဲ? ဒီဟောပြောချက်, တကယ်တော့ရှုပ်ထွေးဘာမှမရှိဘူးပါပဲ။
ငါဘယ်လိုအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေထဲမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အကောက်အခွန် "MTS" ရှာရမလဲ
အဆိုပါအသုံးပြုသောအကောက်အခွန်လမ်းခရီးငွေပေးချေ၏ကြိမ်နှုန်း, မရရှိနိုင် functions များ, အခြားအခွန်မှဝန်ဆောင်မှုနှင့် switch ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုသာသက်ရောက်သည်။ ငါသိ - က MTS စာရင်းသွင်းသူအပါအဝင်တာဝန်ခံ၏အခမဲ့, ဝန်ဆောင်မှုများ၏တရားဝင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်တူညီတဲ့နည်းလမ်းရန်အလွန်အရေးကြီးသောခွင့်ပြုထားပါသည်။ MTS အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဗီဒီယိုကနေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအခွန်နှင့်အင်တာနက်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကဘယ်လိုမာတိကာ: SIM ကဒ်မိုဘိုင်း application ကိုမှတဆင့် modem automated ထောက်ခံမှုဝန်ဆောင်မှုမိုဘိုင်းလက်ထောက်တစ်ဦးကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်အတွက်အသုံးပြုသည်ဆိုပါကပြုလုပ်သကဲ့သို့အခွန်ကိုသိရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အခါရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိပါတယ်လျှင်အကူအညီနဲ့စားပွဲပေါ်မှာချေါအကောက်အခွန် MTS နံပါတ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ဘယ်လို သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအခွန်နှင့်အင်တာနက်ကို "MTS" ကုမ္ပဏီ MTS ဆင်းမ်ကဒ်-ကဒ်အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်ဖော်ထုတ်ရန်ချိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ရွေးချယ်စရာအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေနည်းလမ်းများအများကြီးရရှိခဲ့သည်။
အိုကေ Google ကသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်
သငျသညျယနေ့သငျသညျ, သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုအပေါ်ကို Android running ဖုန်းကိုသာပြောင်းလဲစေနိုင်မည်ကျယ်ပြန့်ကြော်ငြာစကားသံကိုလက်ထောက် Ok Google သည်ကိုသိမှတ်ခဲ့သလား မပေးလိုလျှင် - ပဲတစ်မိနစ်အတွင်းသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အဆင်ပြေကို Google တပ်ဆင်ရန်မည်သို့အဲဒီနောက်အောက်ပါဖော်ပြချက်။ သင်ဘယ်မှာအဆင်ပြေ Google ကဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရှာဖွေနေလျှင်စကားမစပ်, ထို့နောက်အဖြေကအရမ်းရိုးရှင်း - သင်က Google Chrome ကို install လုပ်ထားလျှင်, သင်သည်တစုံတခုကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး, မပါလျှင် - ထို့နောက်ရိုးရှင်းစွာတရားဝင် site ကိုမှာ chrome ကနေဒီ browser ကို download လုပ်ပါ။
Android အတွက် Flash Player ကို Install လုပ်နည်း
အန်းဒရွိုက် running devices များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုရင်ဆိုင်ရတစ်ခုမှာမျှမျှတတဘုံပြဿနာများ - Flash Player ကိုတပ်ဆင်, ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များမှာ flash ကိုကစားရန်ခွင့်ပြုမယ်လို့အရာ။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နှင့် Flash Player ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဘယ်မှာ၏မေးခွန်းကိုအန်းဒရွိုက်အတွက်လိမ်းတစ်ချိန်ကဖြစ်လာသည်ထောက်ခံမှုဒီနည်းပညာပျောက်ကွယ်သွား - အခုတော့ Adobe က website ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးအပေါ်အဖြစ် Google Play စတိုးပေါ်တွင်သင်၏ operating system ကိုများအတွက် Flash ကို plugin ကိုတွေ့ပါ, ဒါပေမယ့်သူက install လုပ်ဖို့ဘယ်လို ရှိနေတုန်းပဲ။